Friends of MoeMaKa - Free Burma News Collection | Category | သတင်းတို
Category Archives: သတင်းတို
Posted on August 29, 2017 by Witmone
မောင် တောဒေသ၌ အစွန်းရောက်ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက် သမားများက တိုက်ခိုက်မှုများ သြဂုတ်.၂၀၁၇
မောင်တောဒေသရှိ လုံ ခြုံရေးရဲကင်းနှင့် ရဲစခန်း စုစုပေါင်း၃၀ ကို အစွန်းရောက် ဘင်္ဂါလီ အ ကြမ်းဖက်သမားများက တစ်ပြိုင် တည်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် လုံခြုံ ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၁ ဦးနှင့် ဝန်ထမ်း တစ်ဦး ကျဆုံးပြီး ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတစ်ဦးနှင့် လုံခြုံရေးတပ် ဖွဲ့ဝင် ၁၁ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံရုံး သတင်း ထုတ်ပြန်ရေး ကော်မတီက ဩဂုတ် ၂၅ ရက်တွင် ထုတ်ပြန် သည်။
မောင်တောမြို့ပေါ်အပါအဝင် မောင် တောဒေသ၌ အစွန်းရောက်ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက် သမားများက တိုက်ခိုက်မှုများ ဆက်လက်ပြုလုပ်ရာ အရပ်သားငါးဦး သေဆုံးကြောင်း နိုင်ငံတော်အတိုင် ပင်ခံရုံး သတင်းထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီက ဩဂုတ် ၂၆ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်သည်။
သြဂုတ် ၂၅ ရက်တွင် အကြမ်း ဖက်သမားမျာ၏ တိုက်ခိုက်မှု ကြောင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၁ ဦး၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနမှ အရာထမ်းတစ်ဦး အသက်ဆုံး ရှုံးခဲ့သည်။ အကြမ်းဖက်မှုတွင် ပါဝင်သည့် အကြမ်းဖက်သမား ၇၇ ဦးကို အသေဖမ်းဆီးရ မိခဲ့ပြီး နှစ်ဦးကို အရှင်ဖမ်းမိခဲ့ ကြောင်း ဩဂုတ် ၂၅ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ထပ် မံ၍ အရပ်သားငါးဦး သေဆုံးခဲ့ ပြီး အကြမ်းဖက်သမားသုံးဦး အ သေရရှိခဲ့ကြောင်း ဩဂုတ် ၂၆ ရက် ည ၉ နာရီထိ ထုတ်ပြန်ချက် များတွင် ဖော်ပြသည်။
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာအေးမောင်အပါအဝင် ပါတီခေါင်းဆောင်များသည် ဩဂုတ် ၉ ရက်က တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် နေ ပြည်တော်၌ တွေ့ဆုံစဉ် ရခိုင် ဒေသလုံခြုံရေးကို တိုးမြှင့်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ရာ ဩဂုတ် ၉ ရက် တွင် တပ်မတော်သားအများအ ပြားကို ရခိုင်ဒေသသို့ စေလွှတ်ခဲ့ သည်။
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီနှင့် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီတို့သည် အစိုးရ ဖွဲ့စည်းပေးထားသည့် ကိုဖီအာ နန် ခေါင်းဆောင်သော ရခိုင်ပြည် နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေးကော်မရှင် ကိုလည်း ကန့်ကွက်ထားသည့် ပါတီများဖြစ်သည်။
မောင်တောမြို့နယ် ကျေးလက်ဒေသများတွင် ပိတ်မိ နေသူများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်း များအတွက် လိုအပ်သော စားနပ် ရိက္ခာများကို ရဟတ်ယာဉ်များ ဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးနေပြီး စားနပ်ရိက္ခာပြတ်လပ်မှု မရှိစေ ရေး တာဝန်ရှိသူများက စီစဉ်ပေး မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်နယ်ဝန်ကြီး ချုပ် ဦးညီပုကပြောသည်။
မောင်တောဒေသတွင် လူဦး ရေ ရှစ်သိန်းသုံးသောင်းကျော်ရှိ ရာ ဘင်္ဂါလီလူဦးရေ ခုနစ်သိန်းခွဲ ကျော်ရှိပြီး စုစုပေါင်း လူဦးရေ၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိသည်။
အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင် ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ ဆေးရုံတွင် သေဆုံးသတင်း
မြန်မာအစိုးရ၏ ဖိတ်ကြားမှုဖြင့် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ်သည် နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက်မှ ၃၀ ရက်အထိ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လေးရက်ကြာ လြာရောက်မည်ဟု ပုပ်ရ ဟန်းမင်းကြီး၏ ဗာတီကန်နန်းတော်နှင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ ကက်သလစ်ဆရာတော် ကြီးများအဖွဲ့ချုပ်များက ဩဂုတ် ၂၈ ရက်တွင် တရားဝင်ကြေညာသည်။ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန်စစ် သည် မြန်မာနိုင်ငံမှတစ်ဆင့် နိုဝင် ဘာ ၃၀ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက် အထိ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့ဆက် လက်သွားရောက်မည်ဟု ဗာတီ ကန်နန်းတော်က ကြေညာထား သည်။.
ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးအခင်းကို တပ်မတော်မှ ထိမ်းသိမ်းပေးရန် အဆိုရှုံးနိုမ်သွားသည်။ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း များတွင်လည်း တပ်မတော် ၀င်ရောက်ထိမ်းသိမ်းမှုကို လွှတ်တော်မှ မထောက်ခံခဲ့သော်လည်း၊ စစ်ရေးသည် တပ်မတော် လက်ထဲတွင်သာ ရှိနေဆဲ ဖြစ်သည်။ ရခိုင်ဒေသခံများက အတူယှဉ်တွဲ မနေထိုင်လိုပဲ ဘင်္ဂါလီများကို ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အပြီးထွက်ခွာရန်သာ လိုလားကြသည်။ ကမ္ဘာ့ အရေးအခင်း ဖြစ်လာပါသည်။
Posted in Kachin States, သတင်းတို, ဆောင်းပါး	| Tagged N Gun Ja Wa	|
Posted on August 5, 2017 by Witmone
ကချင်ပြည်နယ်က ရွာအများစု လျှပ်စစ်မီးမရသေး
2017-07-12 ကချင်ပြည်နယ်မှာ ပိုလျှံလျှပ်စစ်ဓါတ်အား ၉ဝ မဂ္ဂါဝပ်လောက်ရှိပေမယ့် ရွာပေါင်း ၂ဝဝဝ ကျော်ထဲက ၈ဝဝ ကျော် သာ လျှပ်စစ်မီးရရှိပြီး ရွာပေါင်း ၁ဝဝဝ ကျော်ကို မီးမပေးနိုင်သေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လျှပ်စစ် နဲ့ စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီး ဦးဝင်းညွန့် ကို RFA သတင်းထောက် ကိုကျော်မျိုးမင်း က တွေ့ဆုံ မေးမြန်းထားပါတယ်။
ချီဖွေ ၉၉ မဂါဝပ်
မလိ ၁၀.၅ ..စသဖြင့်
အားလုံးပေါင်းထုတ်လုပ်မှု ၁၃၃ မဂါဝပ်၊
သုံးစွဲမြို့ကြီးများက ၄၅ မဂါဝပ်၊ အပို ၉၀ မဂါဝပ် ရှိပါတယ်။
ပိုရှံပေမဲ့ ဖြန့်ဖြူးလို့မရ ၁၁ကေဗွီလိုင်း ဆွဲနေ၊ ဆွဲပြီးနေပါတယ်။ ဓါတ်အားဆုံးရှုံးမှုတွေများပါတယ်။ ၆၆/၃၃ ကေဗွီ ဆွဲခွင့် ပြည်နယ်အစိုးရကို ပေးလိုက်ရင် အများကြီး ပို့နိုင်မှာပါ။ အလှမ်းဝေးတဲ့ ရွာများမှာ ဓါတ်အားလိုင်းကြောင့် မပေးနိုင်သေးပါဘူး။ ရွာ ၁၇၀၀ လောက် ကျန်နေပါသေးတယ်။
၆၆ ဓါတ်အားလိုင်း ဖားကန့်၊ ကားမိုင်း ဓါတ်အားခွဲစက်ရုံတွေလဲ ဆောက်ပြီးပါပြီ။ နယ်မြေလုံခြုံမှု မရသေးလို့ပါ။
လျှပ်စစ်ဓါတ်အားခ ဈေးကြီးနေတာ လျှော့ ချပေးဖို့..ဘူးဂါးတာဝန်ယူထားပါတယ်။ အရင်အစိုးရက တယူနစ်ကို ၁၂၀ နဲ့ ကောက်ပါတယ်။ အခု ၁၁၀ ညှိနှိုင်းပေးပါတယ်။ တဆင့်ယူရောင်းလို့ ဈေးမချနိုင်သေးပါဘူး။ နှုတ်အားဖြင့်တော့ သူတို့ထုတ်နိုင်လာရင် ရှော့ ပေးပါတယ်။ မြစ်ကြီးနား ၀ိုင်းမော် ၂ခုကတော့ ဓါတ်အားခ တော်တော်မြင့်နေပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်၊ရွှေဂူ၊ နမ္ပတီးအောက်ပိုင်းကလည်း ၃၅ကျပ် ဈေးနှုန်းပါပဲ။
ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ထူးကုမ္ပဏီ အစိုးရထံတင်ပြ
2017-07-11 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ဦးတေဇရဲ့ ထူးအုပ်စုကုမ္ပဏီက ကချင်ပြည်နယ် ပူတာအိုမြို့နယ်က မူလာချောင်းမှာ ဓါတ်အား ၅ မဂ္ဂါဝပ်ထွက်မယ့် အသေးစား ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းအတွက် ရှေးဦးလေ့လာဆန်းစစ်ရေးတွေပြု လုပ်ဖို့ ပြည်နယ်အစိုးရထံ တင်ပြထားပါတယ်။
အဲဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝန်ကြီးချုပ်ထံ တင်ပြထားတယ်လို့ ကချင်ပြည်နယ် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လျှပ်စစ်နဲ့ စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီး ဦးဝင်းညွန့် က ပြောပါတယ်။
"သူတို့အခုလာပြီးမှ ကျနော်တို့ဆီလာတင်တာရှိပါတယ်။ကျနော်တို့က ကက်ဘိနက်ကို တင်ပြီးမှ ဒါလေးကို သူတို့ကို ကျွန်တော်တို့က ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတော့ အများအားဖြင့်တော့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ကတော့ ခွင့်ပြုမှာပါ။ ဒီအသေးလေးတွေကတော့ တကယ်လည်းလိုအပ်နေတယ်။ သူတို့ရဲ့ ကနဦး စူးစမ်းလေ့ လာမှုကိုပဲ ကျနော်တို့က ခွင့်ပြုပြီး သူတို့ရဲ့တင်ပြလာမှုအပေါ်မှာ ထပ်ပြီးမှ ဒါကျနော်တို့က ညှိနှိုင်းပြီးမှ ဒါအသေးစားဆိုရင်တော့ ဒီ impact တွေ သိပ်မရှိဘူးလို့ပဲ ထင်ပါတယ်။ တကယ်လည်း လိုအပ်နေတဲ့နေရာဆိုရင်တော့ ပြည်သူတွေလည်း ဒီလောက်ကြီးတော့ ကျနော်ထင်ပါတယ်၊ သူတို့လည်း သူတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်လည်းရှိတဲ့အတွက် ပိုလည်း ထုတ်လုပ်တာလည်း မဟုတ်တဲ့အတွက်တော့ ပြည် သူတွေရဲ့ impact လည်း ဒီလောက်လာမယ်လို့တော့ ကျနော်လည်းမထင်ပါဘူး။"
ပူတာအိုမြို့နယ်အတွင်း ဒေသခံတွေရဲ့ ဆန္ဒသဘောထားနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိစ္စတွေ အပါအဝင် ကနဦးလေ့လာရေးတွေပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါ ပြည်နယ်အစိုးရက ခွင့်ပြုသဘောတူရင် ပြည်ထောင်စုအစိုးကို ဆက်လက်တင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့တွေဟာ မဂ္ဂါဝပ် ၃၀ အထိ ဓါတ်အားထွက်ရှိမယ့် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းတွေကို စိစစ်ခွင့်ပြုနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
လောလောဆယ် ပူတာအိုမြို့နယ်အတွင်း ၃.၂ မဂ္ဂါဝပ်ထွက်ရှိမယ့် အထက်နမ့်ထွမ် အသေးစား ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းကို အစိုးရအဖွဲ့က အကောင်အထည်ဖော်နေပြီး အဲဒီစီမံကိန်းမှာလည်း ထူးအုပ်စုကုမ္ပဏီက အစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ တစိတ်တပိုင်းလုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်က ထုတ်ပြန်တဲ့ ရှေ့ပြေးသန်းခေါင်းစာရင်း အချက်အလက်တွေအရ လူဦးရေ ၉သောင်းကျော်ရှိတဲ့ ပူတာအိုခရိုင်ဟာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲပြီး လျှပ်စစ်မီးမရရှိသေးတဲ့ ခရိုင်တခုဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ဆိုင်းငံ့ထားပြီးနောက်ပိုင်း ကချင်ပြည်နယ်မှာ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအပါအဝင် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း ၁၄ ခုကို အစိုးရနဲ့ တရုတ်ကုမ္ပဏီ ၃ ခုတို့ အကျိုးတူပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရနဲ့ အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ တရုတ်ကုမ္ပဏီ ၃ ခုက Yunnan Provincial Investment Holding Group၊ China Power Investment နဲ့ Datang United Hydropower Developing ကုမ္ပဏီတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
မြစ်ကြီးနားခရိုင်က ၉၉ မဂ္ဂါဝပ် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်နိုင်တဲ့ ချီဖွေငယ်နဲ့ ဗန်းမော်ခရိုင်က ၂၄၀ မဂ္ဂါဝပ် ထုတ်နိုင်တဲ့ တာပိန် (၁) ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းတွေကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်တယ်။
ချီဖွေငယ်စီမံကိန်းက ဓါတ်အားတွေကို မဟာဓါတ်အားလိုင်းနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး ပြည်နယ်အတွင်းမှာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူးနေပြီး တာပိန်(၁) စီမံကိန်းကထွက်တဲ့ ဓါတ်အားတွေထဲက ၁၉ ရာခိုင်နှုန်း ပြည်နယ်အတွင်းမှာ ဖြန့်ဖြူးဖို့ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ပိုလျှံနေလို့ မဖြန့်ဖြူးနိုင်ပါ။
၁။ ကချင်ပြည်နယ်တွင် လက်ရှိ လျှပ်စစ်ပိုရှံပြီး၊ မဟာဓါတ်အားလိုင်းမရှိသဖြင့် ကျေးရွာနှင့် အခြားဒေသများသို့ မဖြန့်ဖြူးနိုင်သေး။
၂။ မြစ်ကြီးနား၊ ၀ိုင်းမော် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားခ အလွန်ဈေးကြီးနေခြင်း တယူနစ် ၃၀၀ကျပ်
၃။ ကချင်ပြည်နယ်တွင်း မီနီဂရစ် ရေအားလျှပ်စစ် အသေးစားများ ဆောက်လုပ်ရန်
၄။ ၆၆/၃၃ ကေဗွီ လိုင်းဆွဲခွင့် ပြည်နယ်အစိုးရအား ပေးအပ်ရန် (၁၁ကေဗွီလိုင်း ဓါတ်အားလိုင်းဆုံးရှုံးမှုများလို့ဖြစ်ပါတယ်။)
ကချင်ပြည်နယ်အနာဂါတ်မှာ ရေအားလျှပ်စစ် အမြောက်အများ ထုတ်လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖြန့်ဖြူးဖို့ မိုင်ပေါင်းများစွအတွက် ၂၃၀ကေဗီ၊ ၁၁၀ကေဗွီ မဟာဓါတ်အားလိုင်းများ အရင်သွယ်တန်းဖို့လိုပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ ဘဏ်က ချေးငွေနဲ့ မဟာဓါတ်အားလိုင်းများက ကချင်ပြည်နယ်က လျှပ်စစ်ကို လိုင်းဆုံရှုံးမှုနည်းစွာနဲ့ သွယ်တန်း၊ ယူသုံးဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
ယခင် ၂၀၁၁ မှာ စီမံကိန်းအများစုကတော့ ဆိုင်းငံထားပါတယ်။ (MW Mega Watt)
မြစ်ဆုံ 6000 MW
ချီဖွေ 2800 (ပြိးစီး)
တာပိန်(၁) 240 (ပြီးစီး)
အချို့စီမံကိန်းများကို ပြန်လည်စတင်ဖို့လည်း တရုပ်ကုမ္ပဏီများရဲ့ စာချုပ်များကို ပြန်လည် စီစစ်ဖို့လိုအပ်သလို၊ ယုံကြည်မှု ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ ပိုအရေးကြီးပါတယ်။
လျှပ်စစ်ဓာတ် စီမံကိန်း ၆၀ ခု စီစဉ်ထားရှိ
15 March 2017 နေပြည်တော်၊ မတ်လ ၁၅ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ရေအား၊နေရောင်ခြည်နှင့် လေစွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ် စီမံကိန်း ၆၀ ခုတို့ ကို စီစဉ်ထားရှိတယ် လို့ လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီးဒေါက်တာထွန်းနိုင်ကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ ရှင်းလင်း တင်ပြခဲ့သည်။
၂၀၁၇ သုံးစွဲမှု ၃၁၉၂ မဂ္ဂါဝပ် ၊ လိုအပ်မှု ၄၅၀ မဂ္ဂါဝပ်
၂၀၁၈ သုံးစွဲမှု ၃၅၈၇ မဂ္ဂါဝပ်၊ လိုအပ်မှု ၈၄၄ မဂ္ဂါဝပ်
အဆိုပါ လျှပ်စစ်စီမံကိန်း ၅၀ ခုတို့ မှာ ရေအားလျှပ်စစ်တွင် MOU ရေးထိုးပြီး စီမံကိန်း ၂၈ ခု၊ MOA ရေးထိုးပြီး ၁၂ ခု၊ ပဋိညာဉ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီး သုံးခု နှင့် JVA ချုပ်ဆိုပြီး ခုနစ်ခုတို့ ဖြစ်ကြောင်း၊ နေရောင်ခြည် စွမ်းအင်သုံး တွင် MOU ရေးထိုးပြီး သုံးခု၊ MOA ရေးထိုးပြီး နှစ်ခုတို့ ဖြစ်ကြောင်း၊ လေစွမ်းအင်သုံးတွင် MOU ရေးထိုးပြီး လေးခု၊ MOA ရေးထိုးပြီး တစ်ခုတို့ ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ရှင်းပြပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ ဘဏ် ချေးငွေ အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၁၄၀ နဲ့ ၁၃၆ မဂ္ဂါဝပ် သထုံ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ နှင့် စွန့် ပစ်အပူသုံး ဓာတ်အားပေး စက်ရုံစီမံကိန်း၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လတွင် ပြီးစီးပါမယ်။
ဂျပန် ချေးငွေနဲ့ သီလ၀ါစက်မှုဇုန်မှာလည်း ၅၀ မဂ္ဂါဝပ် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ သုံး ဓာတ်အားပေး စက်ရုံစီမံကိန်းကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ပြီးပါတယ်။
China Exim Bank ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ချေးငွေ
သူဌေးချောင်း ရေအားလျှပ်စစ် ၁၁၁ မဂ္ဂါဝပ် စီမံကိန်းကို စက်ပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူရန် ဒေါ်လာ ၅၉ သန်း ၂၀၂၄ ခုနှစ်မှ ပြီးပါမယ်။
အထက်ရဲရွာ ရေအား လျှပ်စစ် ၂၈၀ မဂ္ဂါဝပ် စီမံကိန်းကို ၁၀၂ သန်းခန့် နဲ့ ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ ပြီးပါမယ်။
အထက် ကျိုင်းတောင်း ရေအားလျှပ်စစ် ၅၁ မဂ္ဂါဝပ် စီမံကိန်း ဒေါ်လာ ၂၉ သန်း ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ ပြီးစီးပါမယ်။
တရုပ်နိုင်ငံမှာ ပိုလျှံလျှပ်စစ် ၀ယ်ယူသုံးစွဲရန်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံခြားအမှီခိုကင်းရေး စိုးရိမ်မှုကြောင့် နိုင်ငံခြားလျှပ်စစ်များကို ၀ယ်ယူသုံးစွဲဖို့ အခက်ခဲဖြစ်ရပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာ အနိုင်ကျင့်မှုမရှိအောင် တတ်ကျွမ်းပညာရှင်များက တရားမျှတတဲ့ စာချုပ်များ ချုပ်ဆိုမှာဖြစ်လို့ အရင် မြစ်ဆုံ၊ ကြေးနီ၊ဓါတ်ငွေလိုင်း စီမံကိန်းစာချုပ်များလို တဖတ်သတ် စာချုပ် မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီချုပ် အစိုးရက တတ်ကျွမ်းတဲ့ နိုင်ငံခြားပညာရှင်များ (ဥပမာ JICA) ထံမှ တန်ရာတန်ကြေးပေးပြီး စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ လိုပါတယ်။
နယ်စပ်ဒေသများမှာ ထိုင်း၊ လာအို၊ အိန္နိယ စတဲ့နိုင်ငံများက လျှပ်စစ်သွယ်တန်း သုံးစွဲနေခဲ့တာ၊ နားလည်မှုနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ မူဝါဒ ပေါ်လစီနဲ့ ထိန်းသိမ်းရင် ၂ဖက် မျှတတဲ့ Win-Win စာချုပ်များ ဖြစ်လာမှာပါ။
တရုပ်နိုင်ငံက လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ပြီး အနိုင်ကျင့်မှာလဲ စိုးရိမ်စရာမရှိတော့ပါ။ မြန်မာဓါတ်ငွေ၊ ရေနံပိုက်လိုင်းများ တရုပ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံများကို ပို့ပေးနေတာလဲ အပြန်အလှန်အကျိုးပြုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံ ရေနံ၊ ဓါတ်ငွေ့၊ လျှပ်စစ်၊ သောက်သုံးရေ၊ အပြန်အလှန် ဖြတ်သန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့ ခေတ်ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကတော့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ပညာရှင်များ မရှိသေးရင်၊ ငှားရမ်းဖို့ အစိုးရရဲ့ တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံပို့နေတဲ့ မြန်မာဓါငွေလိုင်း ၂၀၀၈၊ ၂၀၁၂၊ ၂၀၁၃ နှစ်များမှာ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကြောင့် တင်ပို့မှုကို ခေတ္တ ရပ်ဆိုင်းချိန်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံက လျှပ်စစ် စက်ရုံအချို့ အားပြန်လည် လည်ပတ်စေပြီး တစ်နိုင်ငံ လုံး၌ လျှပ်စစ် ဓါတ်အား သုံးစွဲမှု ချွှေတာ သုံးစွဲကြရပါတယ်။ ဒီလိုအစီအစဉ်မျိုး အစိုးရကပဲ လုပ်ဆောင်ရပါတယ်။
Posted in Kachin States, သတင်းတို	| Tagged N Gun Ja Wa	|
Posted on June 12, 2017 by Witmone
ကအိုင်အို ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အင်ဘန်လ နှင့် နိုင်ငံ တော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံ၊ … ပင်လုံညီလာခံ၊နေပြည်တော် မေ၂၆၊ ၂၀၁၇
အစိုးရနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ မကြာခဏ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး အောင်မြင်မည်ဟု
7 Days News By
Sun, 2017-05-28 06:30
No.1456 Sunday, May 28, 2017
အစိုးရနှင့်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုများမကြာခဏ ပြုလုပ် မည်ဖြစ်ပြီး အောင်မြင်မှုရှိမည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း ကေအိုင်အို ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အင်ဘန်လ က ပြောကြားသည်။
၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံဖွင့်ပွဲ သို့ တက်ရောက်လာသည့် မြောက်ပိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ များက မေလ ၂၇ ရက်က နေ ပြည်တော်မှ ပြန်လည်ထွက်ခွာ စဉ် သတင်းမီဒီယာများ၏ မေး မြန်းမှုကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဘန်လ က ဖြေကြားခြင်းဖြစ်သည်။
‘‘ဆက်ပြီးတော့ ဆွေးနွေးဖို့ရှိ တယ်။ မကြာဘူး၊ မကြာဘူး။ မကြာမကြာဆွေးနွေးတော့မယ်’’ ဟု ၎င်းက အစိုးရနှင့်ထပ်မံတွေ့ ဆုံမည့်အခြေအနေနှင့်ပတ်သက် ၍ ပြောသည်။ ဆွေးနွေးမှုများ အောင်မြင်နိုင်မှု ရှိ၊ မရှိ အခြေအ နေနှင့်ပတ်သက်၍ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အင်ဘန်လက ‘‘အောင်မြင်မယ်၊ အောင်မြင်မယ်။ မအောင်မြင်တဲ့ အလုပ်ကို မလုပ်ဘူးနော်’’ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံသို့ အထူးဖိတ်ကြားသူအဖြစ် တက် ရောက်ခဲ့သည့် မြောက်ပိုင်းလက် နက်ကိုင်ခုနစ်ဖွဲ့သည် နေပြည် တော်မှ တရုတ်နိုင်ငံ ကူမင်းမြို့သို့ လေယာဉ်ဖြင့် ပြန်လည်ထွက်ခွာ ခဲ့သည်။
KIO အပါအ၀င် မြောက် ပိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၏ နေပြည်တော်ခရီးစဉ်တွင် နိုင်ငံ တော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးနိုင်ခြင်းက အစိုးရနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆွေးနွေးပွဲ များပြုလုပ်နိုင်ရန် လမ်းစပွင့်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း မြောက်ပိုင်းကိုယ်စား လှယ်များက ဆိုသည်။
‘၀’လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ UWSA၊ မိုင်းလားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့(NDAA)၊ ကချင်လက်နက် ကိုင်အဖွဲ့(KIO)၊ ရှမ်းလက်နက် ကိုင်အဖွဲ့(SSPP)၊ တအာင်းလက် နက်ကိုင်အဖွဲ့(TNLA)၊ ကိုးကန့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့(MNDAA)နှင့် ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့(AA) တို့ သည် တရုတ်အစိုးရ၏ ညှိနှိုင်းမှု အရ ၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံဖွင့်ပွဲ နေ့သို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ မြောက်ပိုင်းလက်နက်ကိုင်ခုနစ် ဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ်များပါသော ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီသည် မေလ ၂၃ ရက်တွင် နေပြည်တော်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး မေလ ၂၄ ရက်၌ ၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံဖွင့်ပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ NCA တွင် ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမရှိ သေးသည့် ယင်းအဖွဲ့များအနေ ဖြင့် ညီလာခံ၌ သဘောထားတင် ပြခွင့်ရရှိရေး ကြိုးစားသော် လည်း ခွင့်ပြုချက်မရခဲ့ပေ။ ထို့ ကြောင့် ညီလာခံဖွင့်ပွဲနေ့သာ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
မေလ ၂၆ ရက်တွင် နိုင်ငံ တော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်က မြောက် ပိုင်းခုနစ်ဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်များကို နှစ်ဖွဲ့ခွဲ၍ တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း မရှိသေးသည့် '၀' အဖွဲ့ အပါအ၀င် မြောက်ပိုင်း တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်ခုနစ်ဖွဲ့တို့ နေပြည်တော်တွင် တွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် UWSA၊ KIA၊ SSPP၊ NDAA စသည့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ နေပြည်တော်တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ် (ဓာတ်ပုံ-စိုင်းဖုန်းဟန် SSPP/SSA)
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း မရှိသေးသည့် ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ (FPNCC) အဖွဲ့ဝင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခုနစ်ဖွဲ့တို့သည် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နေအိမ်၌ မေ ၂၆ ရက်က တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ KIA ၊ '၀'လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ UWSA ၊ ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ SSPP နှင့် မိုင်းလားအဖွဲ့ NDAA တို့နှင့်လည်းကောင်း၊ ကိုးကန့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ MNDAA ၊ ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ AA နှင့် တအာင်း လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ TNLA တို့နှင့်လည်းကောင်း တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော်တို့ ဘာမှ မဆွေးနွေးပါဘူး။ အဓိက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ရင်းနှီးအောင် တွေ့ဆုံတာပါ။ အိမ်သွားတယ်ဆိုတာ မိသားစုလို ရင်းရင်းနှီးနှီး ပိုပြီးတော့ ရင်းနှီးအောင် ဆိုပြီးတော့ သွားပြီး တော့သွားတွေ့တာ။ သူပြောတဲ့ NCA နဲ့ ကျွန်တော်တို့ ပြန်ပြင်ထားတာနဲ့ မတူဘူးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့က အရင် NCA တော့ ကျွန်တော်တို့က ထိုးမှာ မဟတ်ဘူး။ ဒီတစ်ခေါက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တရုတ်ပြည်ကို သွားတဲ့အချိန်က တရုတ်ပြည်ရဲ့ One Belt, One Road ပေါ်လစီပေါ့နော်။ အဲဒါလည်း နည်းနည်းဆွေးနွေးတာ။ ဟိုရှိကျင်ဖျင်နဲ့ တွေ့လိုက်သေးတာပေါ့နော်။ ဒီကြားထဲမှာ သဘောတူညီထားတာ ရှိရင်ရှိမှာပေါ့နော်။ အဲဒါကြောင့်မို့ ဒီဟာ တိုက်တွန်းပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ရောက်အောင် သူတို့ရဲ့အကျိုး ဗမာပြည်ရဲ့ အကျိုးကိုပေါ့ နှစ်ဖက်အကျိုးလည်း ပါတာတော့ အဲဒါကြောင့်မို့ သူတို့က အားသွန်ခွန်စိုက်နဲ့ ဒီနိုင်ငံရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်မှာ ပါဝင်နိုင်အောင်ပေါ့။ တပ်ဘက်က UWSA '၀'နဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ကျွန်တော်ထင်တာတော့ တွေ့မယ်မထင်ပါဘူး။ ဟိုစစ်တိုက်နေတဲ့ သုံးဖွဲ့လည်း ကျွန်တော်တို့က ခေါ်လာတာကိုး။ ကျွန်တော်တို့ ခုနစ်ဖွဲ့က နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေး ကော်မတီပေါ့ သိပ်မထူးဆန်းပါဘူး။ သူ့ရပ်တည်ချက်နဲ့ ကိုယ့်ရပ်တည်ချက်ရှိတာပေါ့ ညှိယူရမှာပေါ့။ အားလုံးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆောင်ရွက်မယ်ဆို တစ်ရက်ရက်တော့ ငြိမ်းချမ်းလာမှာပါလို့ ကျွန်တော်အပြည့်အ၀ ယုံကြည်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ဘယ်လို ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ ဆက်သွယ်မယ်ဆိုတာ ရှိပါတယ်”ဟု '၀' လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မှ ပြင်ပဆက်ဆံရေး တာဝန်ခံ ဦးကျောက်ကွက်အမ်းက ပြောကြားသည်။
ထို့အတူ တအာင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ TNLA အတွင်းရေးမှူး တာပန်လှက “ကျွန်တော်တို့ကတော့ ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ ဒီကနေပြီးတော့ ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ကိုတော့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်။ အထူးသဖြင့်ကတော့ အခု ကျွန်တော်တို့ သွားပြီးတွေ့ဆုံတာက ကျွန်တော်တို့ ၂၁ ရာစု ပင်လုံ ရောက်လာတယ်။ နေပြည်တော် ရောက်လာတယ်။ သူက တာဝန်ရှိတဲ့သူအနေနဲ့ ကြိုဆိုတယ်ပေါ့လေ။ အဲဒီအဆင့်လောက်ပါပဲ။ အကျိုးရှိပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ PSLF/TNLA နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် မြောက်ပိုင်းက အဖွဲ့တွေနဲ့ ပဲ ဖြစ်ဖြစ် လအတန်ကြာပေါ့လေ။ ပိတ်ဆို့နေတဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုက တာဝန်ရှိတဲ့သူ အချင်းချင်းတွေ့ဆုံနိုင်ဖို့ အထူးသဖြင့် အစိုးရဘက်က တွေ့ဆုံနိုင်ဖို့က လမ်းကြောင်း မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူး။ အခု ဒါလမ်းကြောင်း စတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီပေါ့။ ဆက်သွားနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ဘက်က မျှော်မှန်းပါတယ်။ အခု ဒီကိုရောက် ရှိလာတာက ဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေ ရပ်စဲနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ဘက်က ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ စတင်ပြီးတော့ ခြေလှမ်းလှမ်းတယ်လို့ ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ NCA လက်မှတ် မရေးထိုးရသေးသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ များကို UPDJC က အထူးဖိတ်ကြားသူအဖြစ် ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ-၂၁ ရာစု ပင်လုံ ဒုတိယ အစည်း အဝေးဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားနှင့် ညစာစားပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ကာ မေ ၂၅ ရက်က အစိုးရ၏ငြိမ်းချမ်းရေး ကော်မရှင်နှင့်လည်း တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး မေ ၂၇ ရက်တွင် နေပြည်တော်မှ ပြန်လည် ထွက်ခွာမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခုနစ်ဖွဲ့ဖြင့် ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေး ကော်မတီ (FPNCC) ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
Posted on November 7, 2013 by Lazaru
မြန်မာ့ကာကွယ်ရေးဘတ်ဂျက် မြင့်မားမှု ကမ္ဘာ့ဘဏ်ထောက်ပြ
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုနှစ် မြန်မာ့စီးပွားရေးဟာ ၆ ဒဿမ ၅ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်လာပေမဲ့ လက်ရှိမှာ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုဟာ သြဂုတ်လအတွက် ၇ ဒဿမ ၃ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိနေတာတွေ့ရတယ်လို့ World Bank ကမ္ဘာ့ဘဏ် အဖွဲ့ကြီးက ဒီနှစ် အောက်တိုဘာလမှာ ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေးစောင့်ကြည့်မှု အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကာကွယ်ရေးအတွက် ဘတ်ဂျက်ဟာ မြင့်မားနေဆဲဖြစ်ပြီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုနှစ် ဘတ်ဂျက်မှာတော့ လူမှုရေးကဏ္ဍအတွက် ပိုပြီးသုံးစွဲဖို့ ထောက်ပံ့ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ သွင်းကုန်မူဝါဒ တင်းကျပ်မှုတွေ လျှော့ချလာသလို ငွေလဲလှယ်မှု ကန့်သတ်ချက်တချို့ကို ဖယ်ရှားပေးခဲ့ပြီး အကျိုးရှိတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်နေကြောင်းနဲ့ ပြည်တွင်းမှာ ငွေဖောင်းပွမှုတွေ တိုးနေပေမဲ့ ထိရောက်တဲ့ ငွေလဲနှုန်း တန်ဖိုး ကျနေတာမို့ နိုင်ငံခြား တင်ပို့မှုအား ပိုကောင်းနေတာ တွေ့ရကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှု တိုးနေတာနဲ့ ကုန်သွယ်မှု တိုးလာတာ၊ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ အားကောင်းမှုတွေ ရှိနေတာမို့ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ ၆ ဒဿမ ၈ ရာခိုင်နှုန်းအထိ စီးပွားရေး တိုးတက်လာနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဘတ်ဂျက်ကို ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရာမှာ ငွေကြေးအရင်းအမြစ် အမြင့်ဆုံး သတ်မှတ်ချက်ဘောင်ထဲက ရေးဆွဲတာမျိုး မရှိသေးတဲ့အတွက် သုံးစွဲငွေ ဦးစားပေး ရွေးချယ်ရေးအတွက် အခက်အခဲတွေ ဖြစ်စေတယ်လို့ လည်း ထောက်ပြထားပါတယ်။
ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာအတွက် အများပြည်သူသိအောင် လုပ်ဆောင်ရာမှာ တိုးတက်မှုတွေ ရှိလာပေမဲ့ ဘတ်ဂျက်ကိုယ်တိုင်က ပြည့်စုံမှု မရှိသေးသလို စာရင်းစစ်နဲ့ ပြင်ပ စစ်ဆေးကြပ်မတ်မှုဆိုင်ရာမှာ အားနည်းနေတယ်လို့လည်း အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Posted on July 23, 2013 by Witmone
ကချင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများအတွက် နည်းလမ်းသစ်
ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထည့်သွင်းရန်အစပြုနေပြီဖြစ်သည်။ လူနည်းစု တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များ ဘာကြောင့် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်နေကြပါသနည်း..မေးခွန်း၏အဖြေမှာ – လူကိုလူလို တန်ဘိုးထားသည့် ဆက်ဆံမှု ဖြစ်ပါသည်။ ကချင်ပြည်နယ် KIA ကို လူလူချင်းတန်းတူဆက်ဆံရန်၊ နိုင်ငံရေး၊စီးပွားရေး စသည်တို့တွင် အခွင့်ရေးအနည်းဆုံး ကချင်ပြည်နယ်အတွက်၂၀%မျှခွဲဝေသုံးစွဲရန် မြန်မာအစိုးရတွင် အစီအစဉ်မရှိနိုင်သေးပါ။ ဆက်လက်ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းရပါမည်။ ကချင်ပြည်နယ်အတွက် လမ်းတံတား၊လျှပ်စစ်၊မီးရထားလမ်း တကယ်လုပ်မဲ့ ပရိုဂျက် ပြပါ။ ကချင်ပြည်နယ်မှာ စီးပွားရေးကို KIA အတွက် တန်းတူနီးပါးအခွင့်ရေးပေးမှဲိ့အစီအစဉ်များရှိပါသလား။ မြစ်ကြီးနားမြို့ လျှပ်စစ်ကို KIA ဘူးဂါးစီးပွားရေးအဖွဲ့က ဓါတ်အားပေးထားခြင်း၊ မြစ်ကြီးနားမြို့ လမ်းမကြီးများကို KIA လမ်းအဖွဲ့များက လပ်စားမှုနည်းပါးစွာဖြင့် အမျိုးသားစိတ်ဓါတ်ဖြင့် ဆောက်လုပ်ပေးခြင်းများကို မမေ့သင့်ပါ။
အပြောကောင်းပြီး၊ လက်တွေ့မရှိသည့် လက်နက်စွန့်ခိုင်းရန်မရပါ။ M16, AK47 သေနပ်တစ်လက်နှင့်ကျည်ဆံများကို ကျပ်၁၀သိန်းပေးပြီး၊ ၀ယ်လို့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် လက်နက်စွန့်ပြီး သူပုန်များ ယခုလက်နက်ပြန်ကိုင်သွားကြခြင်းဖြစ်သည်။ လက်နက်အားကိုးနည်းမှာ ယခုခေတ်စနစ်တွင်အသုံးမ၀င်တော့ပါ။ ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ် ရှိနေဦးမည်ဖြစ်သည်။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များအတွက် လက်နက်များကို ၀ယ်ယူပံ့ပိုးပေးလိုက်သည်က နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ပိုမိုယုံကြည်မှုရှိလာမည်လောဟု စဉ်းစားနေမိပါသည်။
Eleven Media မှသတင်းဖြစ်ပါသည်။ ကြိုဆိုပါ၏။
လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ပါဝင်သည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့နှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်သည့် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ အဖွဲ့တို့ ဇူလိုင် ၂၁ ရက် နံနက်ပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရွှေလီလမ်းရှိ Myanmar Peace Center တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
လွှတ်တော်အဖွဲ့တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းနှင့်အတူ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့်တည် ငြိမ်အေးချမ်းရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အေင်ဆန်းစုကြည်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြညိမ်း၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် သူရဦးအောင်ကို စသည်တို့ ပါဝင်ပြီး ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီတွင် သမ္မတရုံးဘပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီ၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်စိုး အပါအ၀င် တာဝန်ရှိသူများ ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။
သူရဦးရွှေမန်းနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ပါဝင်သည့် လွှတ်တော်အဖွဲ့နှင့် ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်သည့် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ အဖွဲ့တို့ ရန်ကုန်မြို့၌ တွေ့ဆုံ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက် နိုင်ငံတကာ အကူအညီများ မရရှိသေးကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။
Posted on June 18, 2013 by Witmone
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဂတိ လိုက်စားမှုနှင့် ဒုတမ္မတဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း
Created on Tuesday, 18 June 2013 05:37
Written by သစ်ထွဋ်
၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း Transparency International အဖွဲ့အစည်းမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် Transparency International အဆင့်သတ်မှတ်ချက်
(စက်ဝိုင်းပြထားသည့် နိုင်ငံများမှာ အဂတိလိုက်စားမှု အဆိုးဝါးဆုံးအဆင့်တွင် ပါရှိသည့် နိုင်ငံများဖြစ်သည်)
နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း ဗဟိုဌာန (MICC) မှာ မကြာမီက ကျင်းပခဲ့တဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာရေးနှင့် ဖြောင့်မတ်ရေး အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲမှာ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဂတိ လိုက်စားမှု အခြေအနေကို ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်းက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောကြားသွားတာ တွေ့ရပါတယ်။
အဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေကို နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်း အလိုက် လေ့လာပြီး အညွှန်းကိန်းအဖြစ် ပြန်လည်တွက်ချက် တင်ပြနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းကြီးဖြစ်တဲ့ Transparency International အဖွဲ့ကြီးက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ “Corruption Perceptions Index” အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အရ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ ၁၇၆ နိုင်ငံထဲက အဆင့် ၁၇၀ ကျော်မှာ သတ်မှတ် ခံထားရတာကြောင့် နိုင်ငံရဲ့ အဂတိ လိုက်စားမှု အခြေအနေဟာ ဆိုးရွားနေတယ်လို့ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဂတိလိုက်စားမှု ပြဿနာကို အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေး၊ တရားရေးအပြင် ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံးကပါ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုတယ်လို့ ဒုတိယသမ္မတက သတိပေး ပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယသမ္မတ ပြောကြားခဲ့သလိုပဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဂတိလိုက်စားမှု ပြဿနာဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ အောက်ခြေအဆင့်ကစပြီး အပေါ်အဆင့်အထိ အုပ်ချုပ်ရေး ကဏ္ဍမှာ လှိုက်စားနေခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ အရင်အစိုးရ တုန်းကတော့ အဂတိ လိုက်စားမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီလိုမျိုး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောလေ့မရှိဘဲ ပြောတဲ့သူတွေကိုတောင် ငြိုငြင်မှု၊ သွယ်ဝိုက် အရေးယူမှုတွေ ဌာနဆိုင်ရာ တချို့မှာ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီဘက်ခတ်မှာတော့ ပြောတဲ့သူတွေကလည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောလာသလို အဂတိ လိုက်စားမှုကိုကာ ကွယ်တိုက်ဖျက်တဲ့ သိသာထင်ရှားတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်လာပါပြီ။
လက်ရှိ အဂတိလိုက်စားမှု တားဆီးရေး ဥပဒေများ
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ဥပဒေတွေ အနေနဲ့ ၁၈၆၁ ခုနှစ် ရာဇ၀တ်မှု ဥပဒေ၊ ၁၉၄၈ ခုနှစ် အဂတိ လိုက်စားမှု တားဆီးရေး ဥပဒေနဲ့ အထူး ဥပဒေပေါင်း ၁၅ ခု ရှိပါတယ်လို့ သိရပြီး ဒီဥပဒေတွေ စိုးမိုးရေးအတွက် အထူးစုံစမ်း စစ်ဆေးရေးဌာန၊ (Bureau of Special Investi- gation) BSI ကို ဖွဲ့စည်းတာဝန် ပေးထားပြီး ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာလည်း အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကုလသမဂ္ဂ သဘောတူညီချက် တစ်ရပ်ကိုလည်း လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး အဂတိ လိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မတီကိုလည်း ယခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၉ ရက်နေ့က ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဂတိလိုက်စားမှု တားဆီးရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဒီလောက်ဥပဒေတွေ ကော်မတီတွေ ရှိနေတာတောင် ဘာကြောင့် လာဘ်စားမှုတွေ နှစ်ကာလ ကြာမြင့်စွာ ရှိနေခဲ့ရပါသလဲ။
ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်းကတော့ အတိတ်ကာလက အကြွင်းမဲ့ အာဏာဟာ လူကိုအကြွင်းမဲ့ ပျက်စီးစေတယ် ဆိုတာကို ဦးစီးဦးဆောင်တဲ့ အပိုင်းက သိရှိနားလည်ပုံ အားနည်းခဲ့ကြပြီး လက်ရှိ အစိုးရအနေနဲ့ သမိုင်းရဲ့ အမွေဆိုး အမွေကောင်းတွေကို ဆက်ခံရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ အကြွင်းမဲ့ အာဏာလို့ ဆိုရာမှာ စစ်တပ်က အာဏာကို ချုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ ၁၉၆၂ ခုနှစ်ကစပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၉၈၈ မှာ အာဏာရယူခဲ့တဲ့ စစ်တပ်ဗဟိုပြု အုပ်ချုပ်ရေး ခေတ်တစ်လျှောက်မှာ အဂတိ လိုက်စားမှုတွေဟာ တားမနိုင် ဆီးမနိုင် ဖြစ်ခဲ့ရာမှာ အဲဒါတွေရဲ့ အကျိုးဆက်အဖြစ် သမ္မတ ကိုယ်တိုင်က နိုင်ငံဟာ အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံတွေမှာ ပါဝင်နေတယ်လို့ ၀န်ခံပြောကြား ခဲ့ရပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ အာဏာရှင်ခတ် တစ်လျှောက် သုံးခဲ့တဲ့ မူဝါဒနဲ့ နည်းလမ်းတွေကို အလုံးစုံစွန့်ပစ်ပြီး ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်းတွေကို အစိုးရအပါအ၀င် နိုင်ငံသား အားလုံးကလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်သာ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ နိုင်ငံသားတွေအဖြစ် ခံယူကြပါစို့ လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်လိုသူတွေ၊ အမှန်တရားကို မြတ်နိုးသူတွေ များလာတာနဲ့အမျှ မမှန်မကန် လုပ်နေသူတွေဟာလည်း တဖြည်းဖြည်း နောက်ဆုတ်သွားမှာဖြစ်…
အဂတိ လိုက်စားမှုတွေဟာ ဘာကြောင့် နှစ်ရှည်လများ တည်ရှိနေခဲ့ ရပါသလဲ။ အဂတိလိုက်စားမှုတွေ ရှိနေတာကို သိရက်နဲ့ ဘာကြောင့် အရေးတယူ ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးမယူခဲ့သလဲ ဆိုတာကတော့ အာဏာကို ချုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ အုပ်ချုပ်သူ အစဉ်အဆက်က အာဏာခိုင်မာရေး အဓိက၀ါဒတွေ ကျင့်သုံးခဲ့တာက အရေးပါတဲ့ အကြောင်း တစ်ရပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာရှင်ခေတ် တစ်လျှောက် နေရာတကာမှာ အကြောက်တရားတွေကို လွှမ်းမိုးထားအောင်လုပ်ပြီး သတင်းအချက်တွေကို ဖုံးကွယ်ထားတာတွေ နီးစပ်ရာ စားတော်ခေါ်ခဲ့ တာတွေက အဂတိ လိုက်စားမှုတွေကို ပြုလုပ်ဖို့ တွန်းအားပေးသလို ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ အခွင့်ထူးခံ လိုတာရနေကျ အခွင့်အရေးတွေ မရတော့မှာ ရာထူးမတိုးမှာ စာမေးပွဲကျမှာ လူတမ်းစေ့ မနေနိုင်မှာ ထမင်းမ၀မှာဆိုတဲ့ အကြောက် တရားတွေအပြင် သတင်းအချက်တွေကို ၀ါဒဖြန့်တဲ့ ယန္တရားတွေသုံးပြီး ကန့်သတ်ထားခဲ့ တာတွေဟာ အဂတိ လိုက်စားမှုတွေကို ပြုလုပ်စေဖို့ အဘက်ဘက်က ဖိအားတွေ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
အာဏာရှင်စနစ်မှာ တန်းတူညီမျှမှု မရှိတာ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နဲ့ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် တွေကိုလည်း အကြောင်း အမျိုးမျိုးပြပြီး ပိတ်ပင်ထားဆီး ခဲ့တာဟာလည်း အဂတိ လိုက်စားမှု ပြဿနာတွေကို ဖွဲမီးလို တငွေ့ငွေ့ လောင်စေခဲ့ပါတယ်။ သတင်းအမှန် တစ်ခုကို ပိတ်ဆို့ခြင်းက သတင်းအမှား တစ်ထောင်ကို ဖန်တီးသလို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ယခင်အစိုးရ လက်ထက်မှာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ဆိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်း ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်တွေကို အစိုးရနဲ့ နီးစပ်သူတွေကသာ ဦးစွာသိရှိပြီးပြင်ပ စီးပွားရေး လောကမှာတော့ သတင်းအချက် အလက်နဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ ရဖို့အတွက် အာဏာပိုင်တွေကို အမျိုးမျိုး လာဘ်ထိုးကာ အဂတိ လိုက်စားမှုတွေကို တိုးပွားစေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကြောက်တရားတွေနဲ့ သတင်းအမှန်တွေ မရရှိသူတွေ အနေနဲ့ လာဘ်ပေးခြင်းနဲ့ အခက်အခဲတွေ ဖြေရှင်းတဲ့ အလေ့အထက လူတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ စွဲစေပါတယ်။ ငွေများ တရားနိုင် ဆိုသလို တရားစီရင်ရေး ယန္တရားကို မယုံကြည် နေသေးသရွေ့ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုတွေ ရှိနေဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဂတိ လိုက်စားမှုတွေ လျော့နည်းစေဖို့ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက အရေးယူမှုတွေ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူဖို့ လိုအပ်သလို အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်မယ့် မီဒီယာတွေရဲ့ လွတ်လပ်စွာ ရေးသားခွင့် ရှိနေဖို့ကလည်း အရေးပါတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ အချိန်မှာလည်း မကြာမီက ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဌာနဆိုင်ရာက အကြီးတန်း အရာရှိတွေကို ရာထူးက နုတ်ထွက်ခွင့် ပြုခဲ့ရာမှာ အဂတိ လိုက်စားမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်မှုတွေ ရှိနေတယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီလိုသတင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ တရားဝင် အသေးစိတ် သတင်းထုတ်ပြန်မှု မရှိသေးတာကလည်း အဂတိ လိုက်စားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတင်းတွေ ရေးသားရာမှာ လက်ရှိအချိန်အထိ အခက်အခဲတွေ ရှိနေတာပါ။
တကယ်တော့ အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ အဂတိ လိုက်စားမှုတွေဟာ ဖွားဖက်တော်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အာဏာရှင်စနစ် ကျင့်သုံးတဲ့ နိုင်ငံအများစုမှာ အဂတိ လိုက်စားမှုတွေ ဒုနဲ့ဒေး ဖြစ်ပွားလေ့ ရှိကြပါတယ်။ နိုင်ငံတော် အာဏာကို လူတစ်စုက ချုပ်ကိုင်တားလေ့ရှိတဲ့ အာဏာရှင် စနစ်မှာ နိုင်ငံရဲ့ ကိစ္စအ၀၀ကို လူတစ်စု (သို့မဟုတ်) လူတစ်ဦးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သာ လုပ်ကိုင်ရလေ့ ရှိတာကြောင့် လူအများစုဟာ အခွင့်အလမ်းတွေ ရရှိဖို့အတွက် သူထက်ငါ မျက်နှာလုပ်ရာက အဂတိ လိုက်စားမှုတွေ ပြုလုပ်မိကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံအတွက် အရေးပါတဲ့ အာဏာခွဲဝေရေး၊ တရားစီရင်ရေးနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက ခွင့်ပြုနိုင်တဲ့ ကြီးမားတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကဲ့သို့ လူအများစု ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေမှာ အဂတိ လိုက်စားမှုတွေ ရှိနေတယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာလေ အခြားသူတွေကိုလည်း အဂတိ လိုက်စားမှုတွေ ပြုလုပ်ဖို့ တွန်းအားပေးသလို ဖြစ်စေခဲ့တာပါ။
ဒီအဂတိ လိုက်စားမှုတွေ ရပ်တန့်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြရမလဲ။ ဒုတိယသမ္မတ ပြောသလို အစိုးရမှာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ တာဝန်ခံမှု၊ စည်းကြပ်နိုင်မှု၊ အရည်အသွေးများ လိုအပ်ခြင်း၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနဲ့ နိုင်ငံတော် အစိုးရ ၀န်ထမ်းများရဲ့ လစာမလုံလောက်မှု ဖြေရှင်းရေး၊ အစိုးရနဲ့ ပုဂ္ဂလိကဌာန အသီးသီးမှာ လည်ပတ်နေကြတဲ့ လုပ်ငန်းစနစ်၊ ၀င်ငွေ၊ လစာနဲ့ ဆုကြေးစနစ်များ ခေတ်နဲ့လျော်ညီရေး တွေကို ပြုလုပ်ပေးရေး၊ လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၊ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆို ရေးသားခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ အသင်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခွင့်၊ မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်၊ ပြည်သူလူထုရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်၊ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ သတင်းအချက်အလက် ရယူပိုင်ခွင့် စတာတွေဟာ အဂတိ လိုက်စားမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာမှုကို တိုက်ဖျက်ဖို့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ အချက်တွေလို့ ဆိုနိုင်ပေမယ့် အဓိက အရင်းအမြစ်ကတော့ စနစ်ပေါ်မှာပဲမူ တည်မှာပါ။
အာဏာရှင်စနစ်ကြောင့် ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ အဂတိ လိုက်စားမှုတွေကို တန်းတူညီမျမူ၊ လွတ်လပ်မှု၊ တရားမျှတမှုကို အခြေခံတဲ့ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို ပီပြင်စွာ ကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်သာ အဆုံးသတ် ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီရဲ့ အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံသားအားလုံး လွတ်လပ်စွာ တန်းတူညီမှု နိုင်ငံသား အခွင့်အရေးတွေ ဖန်တီးပေးနိုင်မှုက အာဏာရှင် စနစ်ရဲ့ အမွေဆိုးဖြစ်တဲ့ အဂတိလိုက်စားမှု ကို တိုက်ဖျက်ဖို့ လက်နက်ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်လာမှာပါ။ ဒီမိုကရေစီစနစ် ပီပြင်လာတာနဲ့အမျှ ကဏ္ဍအသီးသီးမှာ ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်မှုတွေ လျော့ကျပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ တာဝန်ခံမှု၊ တရားဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာမှုတွေ ကြီးစိုးလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေ အနေနဲ့ အာဏာရှင် ခေတ်တစ်လျှောက် သုံးခဲ့တဲ့ မူဝါဒနဲ့ နည်းလမ်းတွေကို အလုံးစုံစွန့်ပစ်ပြီး ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်းတွေကို အစိုးရ အပါအ၀င် နိုင်ငံသား အားလုံးက လိုက်နာကျင့်သုံး ခြင်းဖြင့်သာ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ နိုင်ငံသားတွေအဖြစ် ခံယူကြပါစို့လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်လိုသူတွေ၊ အမှန်တရားကို မြတ်နိုးသူတွေ များလာတာနဲ့အမျှ မမှန်မကန် လုပ်နေသူတွေဟာလည်း တဖြည်းဖြည်း နောက်ဆုတ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတော့တယ်။
Posted on June 4, 2013 by Lazaru
The KIO and Kachin communities “are one”
Kachin leaders back UN involvement
By Myanmar Times June 03, ’13
Members of the Kachin community have asked Vijay Nambiar to help increase international involvement in Myanmar’s peace process duringameeting in Myitkyina last week.
Kachin representatives met Mr Nambiar, the special adviser to UN Secretary-General Ban Ki-moon on Myanmar, on May 29, during the rest day in peace talks between the government and the Kachin Independence Organisation (KIO). Mr Nambiar was an observer at the talks, which concluded with the signing ofaseven-point agreement on May 30.
At the meeting Myitkyina resident Daw Jar Sai Khum said international help was needed to resolve the conflict in Kachin State.
“I think you can understand very well that this conflict has been running since the country became independent more than 64 years ago,” she said. “Ethnic groups around Myanmar are trying to solve the problems within our communities and regions but we cannot manage all of this ourselves.
“It is clear to me that the international community needs to playarole in solving these conflicts.”
Kachin people urged Mr Nambiar to monitor the conflict untilafair solution was found. They also asked him to raise the issue of Myanmar’s ethnic conflicts in the UN Security Council and encourage other members of the international community to take part in the peace process.
Representatives also told Mr Nambiar that the KIO and Kachin communities “are one”.
‘’We want the UN to help as much as it can,” said 81-year-old Daw Innfan Jar Yar. “The government and KIO have held peace talks many times but so far there has not been any positive outcome.
“We suffer the terrible impacts of the conflict,” she said, adding thatapolitical solution was needed. “We want to get [a] federal [system] at once. We don’t want to wait any more to get it.”
The Kachin National Consultative Assembly (KNCA) publishedastatement before Mr Nambiar’s visit and this was presented to him at the meeting. The statement included nine points on the conflict and alleged that the government “consistently ignores the ethnic rights that ethnic nationalities have been demanding, or intentionally stalls and gives excuses”.
The statement said that past meetings have not been successful in part because international monitoring groups have not been involved and called for these groups to be involved in future talks.
Mr Nambiar said at the meeting that the UN is supporting and facilitating peace talks and that those talks were being watched closely around the world.
“Every one of you has an aspiration, an expectation … and an experience. But any political solution that comes will not satisfy everybody in all respects,” Mr Nambiar said.
“I have no doubt that the UN and KIO, as well as the Kachin people and Myanmar people, will see the peace process move forward,” he said.
Posted in INT'l COMMENTARY, Kachin States, သတင်းတို	| Tagged N Gun Ja Wa	|
Posted on June 2, 2013 by Witmone
သုံးရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားက ဆွေးနွေးပွဲအပြီး
သုံးရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားက ဆွေးနွေးပွဲအပြီး တစ်ရက်အကြာ ဒီကနေ့မှာ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ လုပ်ငန်းကော်မတီက ၀န်ကြီးဦးအောင်မင်းက ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့
ကေအိုင်အို ကို တစ်ပတ်အတွင်းမှာ မတရားအသင်း ကြေညာထားတာကနေ ပယ်ဖျက်ပေးမယ်လို့ ပြောလာခဲ့တာပါ။ ၀န်ကြီးဦးအောင်မင်းက သူပြောတဲ့အတိုင်း တကယ်ပဲ ကေအိုင်အို ကို မတရားအသင်းကနေ ပယ်ဖျက်ပေးလိုက်ရင် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်နေချိန်မှာ အများကြီး အားသာမှုတွေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ ကေအိုင်အို ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းသတင်ထောက် ကိုအောင်ရဲမောင်မောင်က တင်ပြထားပါတယ်။
မြစ်ကြီးနားက မနောကွင်းထဲမှာ သုံးရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့နဲ့ ကေအိုင်အို တို့ တွေ့ဆုံအပြီး ၁ ရက်ကြာ ဒီကနေ့ မနက်အစောပိုင်းမှာပဲ ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်းက မြစ်ကြီးနား ဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုကို ရောက်ရှိချိန်မှာ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့နဲ့ ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်တို့ကို အာဏာပိုင်တွေဘက်က မတရားအသင်း သတ်မှတ်ထားတာကိ်ု တစ်ပတ်အတွင်း ပယ်ဖျက်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ ကတိပြုခဲ့တဲ့အကြောင်း သူနဲ့အတူ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကို သွားရောက်စဉ်မှာလိုက်ပါခဲ့တဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ဒွဲဘူက ပြောပါတယ်။
ကေအိုင်အို၊ ကေအိုင်အေကို မတရားအသင်းက ပယ်ဖျက်ပေးဖို့ လွှတ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ ကချင်ဘက်ကလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ က တောင်းဆိုပေးမှုတွေကို မကြခဏဆိုသလို တင်ပြခဲ့သလို၊ အခုအခါမှာ ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်းက မတရားအသင်းအမှုနဲ့ ဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေကိုလည်း တစ်ပတ်အတွင်း ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်း ပြောခဲ့တယ်လို့ သူမကပြောပါတယ်။
“ဖြစ်စေတဲ့အမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၊ မတရားတဲ့အမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ သူတို့အနေနဲ့ ဘာမှ ၀င်စွက်စရာ အကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ အမိန့်ချပြီးတဲ့အခါမှာတော့၊ မတရားအသင်း ပယ်ဖျက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ သူတို့အထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကို တစ်ပတ်အတွင်း၊ ဒုက္ခသည်စခန်းကလည်း တစ်ယောက် ပါတာကိုး။ ပြန်ပို့ပေးမယ်လို့ ၀န်ကြီးက ပြောပါတယ်။ အဲဒီတော့ မတရားအသင်းတွေ ကြေညာထားတာကို ပယ်ဖျက်ကြောင်း ကြေညာပြီးတာနဲ့ ဒီစခန်းကို ပြန်ရောက်စေရမယ် ဆိုပြီးတော့ ပြောပါတယ်။ တစ်ပတ်အတွင်းလို့ ပြောပါတယ်။”
အခုလို ကေအိုင်အို ကေအိုင်အေ ကိုသာ မတရားအသင်းကနေ တကယ်ပယ်ဖျက်ပေး လိုက်ရင် အစိုးရနဲ့ ကေအိုင်အို အကြား နာလည်မှုတည်ဆောက်တဲ့ နေရာမှာ ပိုပြီးယုံကြည်မှုတွေ မြင့်တက် လာနိုင်တယ်လို့လည်း ကေအိုင်အေ ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ဒေါက်တာတူးဂျာ က ပြောပါတယ်။
“ဒီလိုပြောတာ အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။ အခုဟာ ကျနော်တို့က ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲကို ဦးတည်နေတဲ့အချိန်အခါ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးက အရေးကြီးနေတယ်။ မယုံကြည်မှုတွေ ပပျောက်ပြီးတော့မှ အချင်းချင်းယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ စားပွဲဝိုင်းကို အတူတူ ချီတက်သွားပြီးတော့ နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးဖို့ရှိတာကိုး။ ဒါကြောင့်မိုလို့ ဒီလိုပြောဆိုတဲ့ဥစ္စာက ကျနော်ကတော့ အတိုင်းထက်အလွန် ၀မ်းသာတာပေါ့။ ကချင်တွေက တနည်းနဲ့မဟုတ်တနည်းတော့ အမျိုးတွေဖြစ်နေကြတာကိုး။ အမျိုးတွေဖြစ်နေကြတော့ မြို့ပေါ်ကလူတွေနဲ့ တောကလူတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းကလူတွေ ဆိုတာကလည်း နိုင်ငံရေးမပါပေါ့။ တော်လှန်ရေးသဘော အသွင်မဆောင်ဘဲနဲ့ လူမှုရေးအရ ဆက်သွယ်နေတာလည်း ရှိတာပဲ။ အဲဒါကို တခါတည်း ဟိုဘက်ကနေ အပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ ဖမ်းဆီးထားတဲ့ သူတွေလည်း ဒုက္ခသည်စခန်းမှာလည်း ရှိတယ်လို့ သိရတယ်။ ဒါကြောင့်မိုလို့ ၀န်ကြီးက အဲဒီလို သဘောထားကြီးကြီး ပြောဆိုတယ်ဆိုတာကတော့ ဒါ အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။ ဒါမှလည်း ဒုက္ခသည်စခန်းကလူတွေ လည်း နေရထိုင်ရတာ သူတို့ချောင်လည်မယ်လေ။ ပိုပြီး စိတ်ပျော်ကြမှာပေါ့။ မဟုတ်ရင် သံသယစိတ်တွေနဲ့ လွှမ်းမိုးထားလို့ရှိရင် သူတို့ နေရထိုင်ရတာ ပိုပြီးတော့ ကျပ်တည်းတယ်ဗျ။”
အာဏာပိုင်တွေဘက်က မတရားအသင်းလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကေအိ်ုင်အို ကို
မတရားအသင်းက ပယ်ဖျက်လိုက်ရင် ကေအိုင်အေနဲ့ဆက်နွယ်မှု အပါအ၀င် မတရားအသင်းနဲ့ဆက်နွယ်မှုနဲ့ ထောင်ကျနေသူ အားလုံး ပြန်လွတ်လာနိုင် တယ်လို့ လည်း ကချင်အရေးလေ့လာသူတွေက သုံးသပ်နေကြတာပါ။
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အင်အားစုတွေကို အရင်စစ်အစိုးရလက်ထက်က
မတရားအသင်း၊ တရားမ၀င်အသင်းလို့ သတ်မှတ်ပြီးတော့ သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး
နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့သူတွေကို ၁၇/၁ လို့ခေါ်တဲ့ မတရားအသင်းနဲ့ဆက်နွယ်မှု၊
၁၃/၁ လို့ခေါ်တဲ့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရဲ့ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှု ဆိုတဲ့ အမှုတွေနဲ့ တရားဆွဲဆို ထောင်ချလေ့ရှိတယ်လို့လည်း နိုင်ငံရေး အမှုတွေကိုလိုက်တဲ့ တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေ ဦးအောင်သိန်းက ပြောပါတယ်။
ကေအိုင်အိုအဖွဲ့ဟာ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ အမျိုးသားညီလာခံ တက်ရောက်ပြီး ၁၇ နှစ်ကြာ တဘက်နဲ့တဘက်အကြား အပစ်အခတ်တွေမရှိဘဲ နေထိုင် လာခဲ့ရာကနေ ၂၀၁၁ နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာ ကေအိုင်အေ ကို အစိုးရရဲ့ နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် အသွင်ပြောင်းဖို့ ကြိုးစားရာကနေ နှစ်ဘက် တင်းမာမှုတွေ ရှိခဲ့ပြီး တိုက်ပွဲတွေ ပြန်ဖြစ်ခဲ့သလိ်ု အစိုးရက လည်း ကေအိုင်အို ကေအိုင်အေ ကို မတရားအသင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့မှာ ၃ ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဒီဆွေးနွေးပွဲကို ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနား ဒေသခံတွေကလည်း စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့
ကြိုဆိုတာတွေ့ရသလိုပဲ၊ စစ်တပ်ထိန်းချုပ်တဲ့ နယ်မြေတွေထဲက ဒုက္ခသည်တွေရော၊ ကချင်ဘက်က ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေ ဘက်က ဒုက္ခသည်တွေရောကပါ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ အပေါ်မှာ မျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Posted on May 30, 2013 by Witmone
Myanmar resumes peace talks with Kachin rebels (AP News)
Today Online (Singapore) News Paper 28May
MYITKYINA (Myanmar) — Myanmar’s government launchedanew round of peace talks with ethnic Kachin rebels today (May 29), seeking to endamajor armed conflict that has recently been overshadowed by strife between Buddhists and Muslims in other parts of the country.
The top government negotiator said the talks, if successful, could lead toacomprehensive cease-fire agreement with all ethnic rebel groups inamonth or two.
The talks with the Kachin Independence Organization, scheduled to last three days, are the first to be held in the Kachin state capital of Myitkyina.
Fighting erupted in Kachin in June 2011, endingacease-fire that had been in place since 1994 and displacing more than 100,000 people.
Since independence in 1948, Myanmar has faced rebellions fromanumber of minority groups seeking autonomy. While sporadic fighting continues with several, the Kachin are the only major group that has not reachedacease-fire agreement with the elected government of President Thein Sein, who came to power in 2011 after almost five decades of military rule.
“If we can have an agreement with the KIO, the president has the desire to holdaformal cease-fire signing agreement with all ethnic groups” by June or July, said President’s Office Minister Aung Min,aveteran negotiator with ethnic rebel groups who is leading the government side at the talks.
The current fighting began when Kachin guerrillas refused to abandonastrategic base nearahydropower plant that the government is developing inajoint venture withaChinese company. To help maintain peace with the minority groups, the government allows them to maintain their own militias, although in recent years the groups have been pressured to put them under government control.
The two sides had 14 earlier meetings in Ruili in China and Chiang Mai in Thailand, but failed to agree onacease-fire. The government has madeacease-fire its priority, but the Kachin rebels want any agreement to includeapolitical framework that could lead to long-term peace.
The Kachin team at the peace talks is being led by the deputy chief of its military wing, General Gum Maw. Observers include UN special advisor on Myanmar Vijay Nambiar and several Chinese officials. Kachin borders China and the fighting risks destabilizing the area. AP
Photp: Lt. Gen. Myint Soe, left, of Defence Ministry, sits together with Deputy Chief of Staff Maj. Gen. Guan Maw, right, of Kachin Independence Army, duringatea break of their cease fire talks in Myitkyina, Kachin State, Tuesday, May 28, 2013. Photo: AP
Posted on May 29, 2013 by Witmone
Kachin People, KIA and Burmese Army for May2013 Peace Talk in Myitkyina
ငြိမ်းချမ်းဆွေနွေးရန် ရောက်လာသည့် KIO ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို ကချင်ပြည်သူများ ကြိုဆို
ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရန်အတွက် မြစ်ကြီးနားမြို့သို့ရောက်ရှိလာသော ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) ကိုယ်စားလှယ်များကို ကြိုဆိုသည့် ပြည်သူလူထုအင်အားကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် KIO သည်ပြည်သူလူထု အတွက် ကိုယ်စားမပြုဟု ပြောခဲ့သည့် အစိုးရတို့မှ အဖြေရသွားသည်ဟု ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေး အကျိုး ဆောင်အဖွဲ့ (PCG) မှ ဦးခပရာ ခွန်းအောင် (Hka Pra Hkun Awng) က ပြောသည်။
“အစိုးရတွေ အရမ်းအံ့သြတယ်။ ဒီပြည်သူလူထုတွေ မထက်မှတ်ပဲနဲ့ အောင်မြေသစ် ကနေ စီတာပူ ထိ ဆီးကြိုလို့ အရမ်းအံ့ကြတာဟုတ်တယ်။ KIO က ပြည်သူလူထုအတွက် ကိုယ်စားမပြုဘူးလို့ပြောတာ ဒီနေ့တော့ သူတို့အဖြေရသွားတဲ့သဘောပဲ။”
မေလ ၂၇ ရက်နေ့ တွင် KIO ဗဟိုဌာနချုပ်လိုင်ဇာမှ မြစ်ကြီးနားမြို့သို့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရန် ရောက်ရှိလာသော ဦးဆွမ်လွတ်ဂမ် ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်များကို ၀ိုင်းမော်မြို့မှ ပြည်သူလူထုနှင့် မြစ်ကြီးနားမြို့မှ ပြည်သူလူထု ထောင်ဂဏန်းမှ KIO အလံပါသော တီရှပ်နှင့် ၆ လက်မခန့်ရှိသော အလံကို ကိုင်ဆောင်ပြီး ကြိုဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုသို့ကြိုဆိုရာတွင် “KIO က ကချင်တွေအားလုံးနဲ့ အတူတူပဲဆိုတာကိုပြောတယ်။ KIO အလံက အားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ် ဆိုတာကိုပြတယ်” ဟု ကိုယ်တိုင်ကြိုဆိုခဲ့သော ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် (KBC) အထွေထွေအတွင်း ရေးမှူး သိက္ခာတော်ရ Rev . Dr. Hkalam Sam Sun ပြောသည်။
ထို့အတူ “အောင်မြေသစ်ကနေ ဗလမင်းထင်တံတားထိ ကျနော်တို့ ၀ိုင်းမော်အဖွဲ့တွေတန်းစီပြီး အတီးအမှုတ်တွေ၊ ရိုးရာဝတ်စုံဝတ်တဲ့သူတွေက၀တ်နဲ့ KIO အလံတုတ်ကိုကိုင်ပြီး ကြိုတယ်။ ဗလမင်းထင်ကနေ ဟိုဘက်က မြစ်ကြီးနားအဖွဲ့တွေ ကြိုတယ်” ဟု ကိုယ်တိုင်ကြိုဆိုခဲ့သော ၀ိုင်းမော်မြို့မှ အသင်းတော် ဆရာတစ်ဦးပြောသည်။
KIO ဘက်မှ ဦးဆွမ်လွတ်ဂမ်ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ ဒု-စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ဂွန်မော်၊ ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီး လဖိုင်လ၊ ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်နော်၊ ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်တောင် စသည့်ကိုယ်စားလှယ်များကို ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေး အကျိုးဆောင်အဖွဲ့ (PCG)အဖွဲ့နှင့် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းဖော်ဆောင်ရေးလုပ် ငန်းကော်မတီဒုဥက္ကဌ ဦးအောင်မင်း၊ မွေးမြူရေးဝန်ကြီး ဦးအုန်းမြင့်၊ ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦး လဂျွန်ငန်ဆိုင်း၊ UN မှကိုယ်စားလှယ်တို့က နမ်ဆန်ယန်မှ သွားရောက်ကြိုခဲ့ပြီး နေ့လည် ၁၂ နာရီခန့်တွင် မြစ်ကြီးနားမြို့သို့ရောက်ရှိလာကြောင်း သိရသည်။
ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်သော အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များမှာ မေလ ၂၆ ရက်နေ့မြစ်ကြီးနားသို့ရောက်ရှိလာပြီး KIO ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် အခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များမှာ မေလ ၂၇ ရက်ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုသို့ရောက်ရှိလာပြီး KIO ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များသည် မြစ်ကြီးနားမြို့ရှိ KIO ဆက်ဆံရေးရုံးတွင်တည်းခိုကာ အစိုးရအဖွဲ့များနှင့် အခြားလေ့လာစောင့်ကြည့်သူအဖွဲ့များသည် မြစ်ကြီးနားမြို့ရှီ မဒီရာဟိုတယ်တွင် တည်းခိုကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့သည် မေလ ၂၈ ရက်နေ့မှ စတင်ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်း PCG မှ ဦးခပရာ ခွန်းအောင်က ပြောသည်။
“၂၈ ရက်နေ့တော့ အစိုးရနဲ့ KIO ဆွေးနွေးမယ်။ ၂၉ ရက်နေ့မှာတော့ ပြည်သူလူထုတွေနဲ့ KIO တွေ ပြန်တွေ့ပြီး အဖြစ်အပျက်တွေ ပြောပြ ရှင်းပြပြီး ပညာတောင်းတာတွေလုပ်မယ်။ ပြီးတော့ ၃၀ ရက်နေ့မှာ အစိုးရတွေနဲ့ ပြန်ဆွေးနွေးမှာဟုတ်တယ်။”
ဆွေးနွေးမှုကို မနောကွင်း မဂျွယ်ခန်းမဆောင်တွင်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတွင် စစ်ပွဲအရှိန်လျော့ကျရန် တပ်နေရာချထားရေးကို အဓိကဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ယခုဆွေးနွေးမှုသည် KIO နှင့် အစိုးရကြား အစိုးရထိန်းချုပ်သည့်နေရာတွင် ပထမဆုံးကြိမ်တွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်သည်။
မေလ ၂၉ ရက်နေ့ထုတ် The Daily Eleven သတင်းစာ၏ အယ်ဒီတာ့ အာဘော်
Created on Wednesday, 29 May 2013 03:44
အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးမှ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေးဆီသို့
မေ ၂၈ ရက်တွင် အစိုးရနှင့် ကေအိုင်အိုတို့ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေကြပြီ ဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် ဒုက္ခသည်ပေါင်း တစ်သိန်းကျော် ရှိနေပြီး အစိုးရနှင့် ကေအိုင်အိုတို့အကြား စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရန်၊ အပြီးသတ် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးအတွက် ယခုငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲသည် မျှော်လင့်ချက် ရောင်ခြည်ပင် ဖြစ်သည်။
ကေအိုင်အို/ကေအိုင်အေအဖွဲ့ မြစ်ကြီးနားမြို့သို့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲအတွက် လာရောက်သည့် အချိန်တွင် သောင်းဂဏန်းရှိသော ပြည်သူများသည် ကေအိုင်အို အဖွဲ့အား ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ မြင်ကွင်းက ကေအိုင်အိုသည် ကချင်ပြည်နယ် တစ်ခုလုံးကို ကိုယ်စားမပြုနိုင်သည့် တိုင်အောင် ကချင်လူမျိုးများကိုတော့ ကိုယ်စားပြုကြောင်းနှင့် ကေအိုင်အို အနောက်တွင် ကချင်လူထု ရှိနေကြောင်း ပြဆိုနေသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် မည်မျှမျှော်လင့် တောင့်တနေသည်ကို မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။
ကေအိုင်အို/ကေအိုင်အေ အပါအ၀င် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များနှင့် ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိနိုင်ရေးသည့် တိုင်းရင်းသားများ လက်ခံနိုင်လောက်သည့် ဖက်ဒရယ်စနစ် ကျင့်သုံးသော ဒီမိုကရေစီစနစ် ပေါ်ထွန်းလာရေးသည် အရေးကြီးပါသည်။ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို အခြေခံသော စစ်မှန်သော ဖက်ဒရယ်စနစ် ကျင့်သုံးနိုင်ရေးအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို ပြုပြင်နိုင်ရေးသည် အရေးပါလာပြီ ဖြစ်သည်။
ယခုလို မတည်ငြိမ်သေးသည့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး အခြေအနေမှ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး အခြေအနေကို ရရှိရန်မှာ ကချင်ပြည်သူ ပြည်သားများရော မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးက ပြည်သူများပါ လိုလားနေသည့် အရာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး အခြေအနေတစ်ခုမှ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိရန်မှာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်နိုင်ပြီး စစ်မှန်သော ဖက်ဒရယ်စနစ် ဖြစ်ပေါ်လာရေးမှာ အဓိကကျပါကြောင်း The Daily Eleven သတင်းစာမှ ရေးသားအပ်ပါသည်။
Posted on May 27, 2013 by Witmone
သမီးလည်းဆုံး၊ အဖေလည်း တရားစွဲခံရ (Kachin State)
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်ဒေသအတွင်း ၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလက ဖြစ်ပွားခဲ့သော တိုက်ပွဲအတွင်း သမီးဖြစ်သူ မဂျာဆိုင်းအိန် သေဆုံးခဲ့မှုအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးပါရန် နိုင်ငံတော် သမ္မတနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်သို့ တင်ပြခဲ့သည့် ဖခင်ဦးဘရန်ရှောင်သည် ယင်းသို့တင်ပြမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တရားစွဲဆိုခံရပြီး အမှုအား ဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်မြို့ပေါ်တွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့က မိုင်းဗုံးပေါက်ကွဲပြီး ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်အတွက် ကျောင်းဆင်းချိန် ပြန်လာသော ကိုးတန်းကျောင်းသူ မဂျာဆိုင်းအိန် သေဆုံးခဲ့သည်။ အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်သည် စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီဝန်းကျင် ကျောင်းဆင်းချိန်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မဂျာဆိုင်းအိန်သည် ၎င်းတက်ရောက်နေသည့် မှော်ဝမ်းအထက်တန်းကျောင်းမှ နေထိုင်ရာ ဆွတ်ငိုင်ယန်သို့ ပြန်လာစဉ် လမ်း၌ပစ်ခတ်မှုကြောင့် သေဆုံးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရှိရသည်။
ဦးဘရန်ရှောင်သည် ၎င်း၏သမီး သေဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မိမိ၏သမီး သေဆုံးမှုမှာ တပ်မတော်မှ ပစ်လိုက်သော ကျည်ဆန်ဒဏ်ရာကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၊ စစ်ဗျူဟာရုံးများ၊ ၀န်ကြီးဌာနများနှင့် နိုင်ငံတော် သမ္မတအထိ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာနှင့် အောက်တိုဘာလများတွင် ပန်ကြားစာ ပေးပို့ခဲ့သည်။
ယင်းအပေါ် ဖားကန့်ဒေသ ဗျူဟာကုန်းမှ ဗိုလ်မှူးတစ်ဦးက ပုဒ်မ- ၁၂၂ ဖြင့် တရားစွဲဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
“အမှုက သဘာဝမကျဘူး။ သမီးလည်းဆုံး၊ တရားလည်း အစွဲခံရတယ်။ ကျွန်တော်လည်း တိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော့်သမီး အတွက်နဲ့ ဒီလောက်လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိတယ်လို့ မိဘတစ်ဦး အနေနဲ့ ယူဆတယ်ပေါ့။ အဖြစ်မှန် ဖော်ထုတ်ဖို့ လုပ်တာပါ။ အရေးယူပေးပါလို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ အဓိကကတော့ အဖြစ်မှန် ပေါ်ဖို့ပဲ။ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးတာလည်း မရှိဘူး။ တရားစွဲတဲ့ ဗိုလ်မှူးဇာနည်မင်းပိုက်ကလည်း စစ်ဆေးရေး ခုံရုံးအဖွဲ့ထဲမှာ ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုတာ သူမသိဘူးလို့ ဟိုတစ်နေ့ကပဲ တရားရုံးမှာပဲ ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်” ဟု ဦးဘရန်ရှောင်က ၂၀၁၃ ခုနှစ် မေ ၂၅ ရက်က ပြောပြသည်။
မဂျာဆိုင်းအိန် သေဆုံးမှု သတင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး Weekly Eleven ဂျာနယ်တွင် ၂၀၁၂ စက်တင်ဘာလ အတွင်းက ဖော်ပြခဲ့စဉ်
“ရှေ့နေငှားတာ အဆင်ပြေတယ်။ ရှေ့နေကွန်ရက် အဖွဲ့က သုံးဦးကူညီတယ်။ ရှေ့နေတွေကို ထောက်ပံ့ဖို့တော့ မရှိသေးဘူး။ အသွားအလာ စရိတ်ကုန်တာပေါ့။ ရပ်မိရပ်ဖတွေပဲ ကုန်ကျခံတာပါ။ တရားလိုဘက်က သက်သေတွေ အစုံမလာနိုင်တော့ ခက်တာပေါ့။ လွန်ခဲ့တဲ့ မေ ၂၀ ခြောက်ကြိမ် ရုံးချိန်းမှ အစုံလာနိုင်တယ်” ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောပြသည်။
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း တပ်မတော်နှင့် ကေအိုင်အေတို့အကြား အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်ကို ၁၉၉၄ ခုနှစ်က လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
နှစ်ပေါင်း ၁၇ နှစ်အကြာ တစ်ကျော့ပြန် တိုက်ပွဲများ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားမှုသည် ဗန်းမော်ခရိုင်၊ မိုးမောက်မြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်၊ ၀ိုင်းမော်မြို့နယ်များတွင်ပါ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုများ ရှိလာခဲ့သည်။
ကျောက်စိမ်းတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများ အဓိက လုပ်ကိုင်ရာ စီးပွားရေးမြို့ဖြစ်သော ဖားကန့်မြို့နယ်၌လည်း ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလတွင် တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားမှုရှိခဲ့ကာ လုပ်ငန်းနှောင့်နှေးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
ဖားကန့်မြို့နယ်တွင် သြဂုတ်လကုန်ပိုင်း၌ တပ်မတော်နှင့် ကေအိုင်အေအဖွဲ့တို့အကြား တိုက်ပွဲများ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာကာ မူရင်းနေရပ်မှ စစ်ဘေးရှောင်ကာ ဒုက္ခသည် စခန်းများသို့ ခိုလှုံရောက်ရှိလာသူ အရေအတွက်သည်လည်း သောင်းဂဏန်းသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။
ကျွန်တော့်သမီး အတွက်နဲ့ ဒီလောက်လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိတယ်လို့ မိဘတစ်ဦး အနေနဲ့ ယူဆတယ်ပေါ့။ အဖြစ်မှန် ဖော်ထုတ်ဖို့ လုပ်တာပါ။ အရေးယူပေးပါလို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ အဓိကကတော့ အဖြစ်မှန် ပေါ်ဖို့ပဲ . . . . .
ကချင်ပြည်နယ်တွင်း တစ်ကျော့ပြန် စစ်ပွဲများသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန် ၉ ရက်က စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော တစ်နှစ်ကျော် ကြာမြင့်ခဲ့သည့် ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်း သေဆုံးခဲ့ရသော မြေစာပင်များတွင် အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်မျှသာ ရှိသေးသည့် မဂျာဆိုင်းအိန်လည်း ပါဝင်လာခဲ့ပါသည်။
“ပစ်ခတ်မှုတွေ ဖြစ်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ရပ်ကွက်သူ ရပ်ကွက်သား အားလုံးကို ခေါ်ထုတ်ပြီး ယောက်ျားနဲ့မိန်းမ သတ်သတ်စီ ခွဲထားလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဦးဘရန်ရှောင်ဆိုတာ ဘယ်သူလဲလို့မေးပြီး ကျွန်တော့်ကို ခေါ်ထုတ်သွားတယ်။ နောက်ပြီး မီးဖိုချောင်လေးမှာ ရဲဘော်နှစ်ယောက်နဲ့ ကျွန်တော့်သမီးကို ဒဏ်ရာတွေနဲ့ တွေ့ရတာပဲ။ ကျွန်တော်က စစ်ကြောင်းမှူးကို ဆေးရုံပို့ချင်တယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ စစ်ကြောင်းထွက်မှ ပို့ပါလို့ သူကပြောပါတယ်။ တကယ်တော့ ကလေးက သွေးလွန်လို့သေရတာ။ သူတို့ထွက်သွားမှ ရပ်ကွက်က ကားအကူအညီနဲ့ ဆေးရုံကို ပို့ရတာ။ ဆေးရုံရောက်တော့ ညနေ ၆ နာရီ ကျော်ပြီ” ဟု ဦးဘရန်ရှောင်က ၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ အတွင်းက Eleven Media သို့ ပြောကြားထားသည်။
စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက် ပစ်ခတ်မှုများကြောင့် မှော်ဝမ်းမှ မဆိုင်းလုပန် (အသက် ၁၇ နှစ်)၊ ဂလောင်းခေါဘောမ် (ခ) ယာကု (အသက် ၃၆ နှစ်)၊ ကိုကျော်ထိန်လင်း (အသက်၂၇ နှစ်)၊ ခေါဆောင် (အသက် ၃၅ နှစ်)၊ ဆွတ်ငိုင်ရန်မှ ကိုစိုးမိုး (အသက် ၄၄ နှစ်)၊ မှော်ဝမ်းစစ်ပြေး ဒုက္ခသည် မလုဘူခွန်ဆိုင်း (အသက် ၃၁ နှစ်)၊ မလုဘူဂျာလုအွန် (အသက်ရှစ်နှစ်) တို့လည်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့ကြသည်။
လက်ရှိတွင် ဦးဘရန်ရှောင်အား တရားစွဲဆိုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တရားလိုနှင့် တရားလိုပြ သက်သေများကို စစ်ဆေးနေသည့် အဆင့်သာ ရှိသေးကြောင်း ရှေ့နေဦးရွှေလှက ပြောပြသည်။
“တရားလို ဗိုလ်မှူးဇာနည်မင်းပိုက်နဲ့ တရားလိုပြ ဆရာဝန်ကောင်းမြတ်စံကို စစ်ပြီးသွားပါပြီ။ တရားလိုပြ ရှစ်ယောက်မှာ ခြောက်ယောက်ကျန်သေးတယ်။ ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့ ဆက်စစ်မှာပါ။ အဖြစ်မှန်ကိုတော့ အခင်းဖြစ်တုန်းမှာရှိတဲ့ သက်သေတွေကို စစ်ဆေးပြီး ဖော်ထုတ်ရမှာပါ။ ဦးဘရန်ရှောင် တိုင်ကြားရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ ဖြစ်နေတုန်း အခြေအနေ အကြောင်းအရာတွေကို မူတည်ပြီး တိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ စုံစမ်းရေး အဖွဲ့ကတော့ ရွာထဲမှာ ပစ်တယ်၊ မိုင်းကွဲတယ်၊ လက်နက်ကြီး သို့မဟုတ် မိုင်းစလို့ ယူဆရတယ်။ ဦးဘရန်ရှောင်ကတော့ တပ်မတော်သား ပစ်တဲ့ကျည်ဆန်မှန်လို့ သူ့သမီးသေတယ်လို့ သူယုံကြည်ပြီး တိုင်တာပါ” ဟု ၎င်းကပြောပြသည်။
“ဥပဒေအရတော့ တစ်ဖက်သားကို နစ်နာစေလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ တမင်ကြံစည်ပြီး လိမ်လည်တိုင်ကြားမှ ပြစ်မှုမြောက်တာပါ။ အဖြစ်မှန်ကိုတော့ နှစ်ဖက်စလုံး သက်သေခေါ်ပြီး စစ်ရဦးမှာပါ။ ယုံကြည်လောက်စရာ အကြောင်းမရှိဘဲ နစ်နာအောင် တိုင်ကြားရင် ဒီပြစ်မှု မြောက်တာပေါ့။ ဦးဘရန်ရှောင်ကို တရားစွဲတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်းက မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ကို တိုင်ကြားတဲ့ စာထဲမှာ တပ်မတော်သား တစ်ယောက်က အကြောင်းမဲ့ ပစ်လိုက်လို့ သူ့သမီး သေသွားတယ်၊ အဲဒါကို အရေးယူပေးဖို့ တိုင်တာပါ။ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့က စစ်ဆေးတဲ့အခါ အကြောင်းမဲ့ ပစ်တာ မဟုတ်ဘူး။ တိုက်ပွဲဖြစ်၊ မိုင်းကွဲ၊ လက်နက်ကြီးစမှန်လို့ စုံစမ်းစစ်ဆေး တွေ့ရှိတယ်ပေါ့။ အဲဒါကြောင့် ဦးဘရန်ရှောင်ကို တိုင်တာပါ” ဟု ဆက်လက်ပြောပြသည်။
“ကျွန်တော်တို့ အားလုံးပဲ ငွေစုပြီး ရှေ့နေအတွက် ကူညီတာပါ။ သိန်းလေးဆယ် ကျော်ပြီ။ အဖွဲ့အစည်း အနေနဲ့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒေသခံတွေကတော့ ဒီကိစ္စအတွက် စိတ်မကောင်းကြပါဘူး” ဟု ရပ်မိရပ်ဖ တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးရင်ထွေးက ပြောပါသည်။
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားမှုသည် နှစ်နှစ်ဝန်းကျင်သို့ ရောက်ရှိတော့မည်ဖြစ်ပြီး ယင်းကာလအတွင်း လူသေဆုံးမှုများ၊ လူမှုစီးပွားရေး ထိခိုက်နစ်နာမှုများ၊ စစ်ဘေးဒုက္ခသည် တစ်သိန်းဝန်းကျင် နေရပ်စွန့်ခွာရမှုများ ရှိခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် ကျောင်းဖွင့်ရာသီ ရောက်ရှိတော့မည် ဖြစ်သည့်အတွက် ဒုက္ခသည် စခန်းများတွင် နေထိုင်သော ကျောင်းနေရွယ် ကလေးငယ်များ ပညာသင်ယူနိုင်ခွင့်နှင့် ဒုက္ခသည်များအတွက် အစားအစာ လိုအပ်ချက်လည်း ရှိနေသည်ဟု လူမှုကူညီရေး လုပ်ကိုင်သူများထံမှ သိရသည်။
Posted on May 24, 2013 by Witmone
ဆရာစိုင်းအေးနှင့်အဖွဲ့ ကချင်ဒုက္ခသည်စခန်း၊ မိုင်တိုင်အမှတ်(၆) လူဟောင်ရွာသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အမြင့်ပေ၉၀၀၀ မှာရှိပြီးတော့ အင်မတန်မှအေးပါတယ်။ ဆောင်ရာသီနှင့်ကျချိန်မှာ တစ်ထွာလောက်ထူတဲ့ ဆီးနှင်းများရှိပါတယ်။ (ဓါတ်ပုံ)၊ ဒုက္ခသည်ငါးရာခန့်ရှိပြီး၊ အိမ်ထောင်စု ၁၀၀လောက်ရှိပါတယ်။ အများစုဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ကျော်ကတည်းက ကချင်နဲ့ဗမာတပ်မတော် တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် စစ်ဘေးရှောင်ရင်း ဒီနေရာကိုရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်လတခါ ၀မ်ကျောင်၊ ဂရုနာအဖွဲ့က ဆန်၊ဆီ၊ဆားများ လာရောက်ပေးပါတယ်။
တရုပ်ငွေလည်း သုံးစွဲဖို့ ပေးပါတယ်။ အနီးဆုံးဈေးက တနေကုန်လမ်းလျှောက်သွားရပါတယ်။ ဆရာစိုင်းအေးအဖွဲ့ဟာ ၅နာရီခွဲကြာအောင် မော်တော်ဆိုင်ကယ်များနဲ့ အခက်အခဲများစွာတွေ့ကြုံပြီး၊ ဒီဒုက္ခသည်စခန်းကို ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ စုစုပေါင်း ၅ညတိုင်အောင် ဒုက္ခသည်များနဲ့ အတူနေထိုင်၊ နှုတ်ကပတ်တော်များကို ဝေငှ၊ သီဆိုချီးမွမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ အတူစားသောက်၊ချက်ပြုတ်ကြပါတယ်။ ကျောင်းစာသင်ကျောင်း ဆရာမများကို အင်တာဗျူးမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။ ရ၀မ်၊လဖိုင်၊ဂျိမ်းဖော အမျိုးသမီးများဖြစ်ကြပါတယ်။ ကလေးများနဲ့ဒုက္ခသည်များကို ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်း၊ ယုံကြည်သူများအတွက် လိုအပ်ချက်များကို ယေရှု၊ ပေးဆပ်သွားခဲ့ပြီ၊ အသွေးတော်အားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းများမှ လွတ်မြောက်ခဲ့ကြောင်း နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်၊ အားပေးခဲ့ပါတယ်။ ဓမ္မသီချင်းများ သီဆိုချီးမွမ်းပြီး မော်တော်ဆိုင်ကယ်များနဲ့ ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ ဆရာစိုင်းအေးနှင့်အဖွဲ့မှ မအောင်ဆိုင်းဂျာ သက်သေခံတင်ပြပါတယ်။
16 minutes Interview Story by GospelInterview
Posted in Kachin States, သတင်းတို, အင်တာဗျုး	| Tagged N Gun Ja Wa	|